Ịkụ ọka sitere na mkpụrụ: kụrụ na ilekọta ụlọ ezumike ha - Nchekwa ọka - 2019
Ihe ndị bụ isi na-akụ ma na-elekọta ọka n'ubi
Ọka bụ otu n'ime ihe ndị a kacha ewu ewu n'ubi a, nke ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ubi na-akọ. Nke a abughi nani ihe na-adọrọ adọrọ na salads, kamakwa nri mara mma. Ịkụ ọka n'ala ogige na osisi bụ ụzọ dị mma iji nweta ngwaahịa a pụrụ iche. Ịgha ọka nke dị n'ọhịa na-amalite site na ịhọrọ ụdị ihe ọkụkụ. Tupu ị kụrụ ọka, ọ dị mkpa ka ị mara nke ọma otu n'ime ụdị dịgasị iche iche ka mma. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ọka dị iche iche, banyere iwu nke ịkụ na ịchekwa osisi n'ubi.
Atụmatụ nke kụrụ ọka n'ala
Nhọrọ saịtị maka akuku
Esi kota ọka
Na-akwadebe ala maka akuku
Mkpụrụ osisi na-emeghe n'ala
Kedu ka esi eto ọka n'ọhịa
Atụmatụ na-eto eto ọka na mba: esi elekọta osisi
Egwu na ahịhịa wepụ
Ịgbara na nri
Ọka: Nkọwa nke Osisi Cultivated
Ọka - onye nnọchiteanya nke ezinụlọ ọka, ma ọ bụ Myatlikovs. Nke a bụ ahịhịa ndụ nke na-abịa n'ókèala anyị site na Mexico.
Ị ma? Ọka - aha mkpụrụ ndụ ihe nketa, nke otu osisi nwere otu aha - ọka.
Osisi nwere ike iru 3 mita n'ịdị elu, ụfọdụ ụdị nwere ike too ruo 6 mita. Ọka dị iche na ọka ndị ọzọ dị na isi, bụ nke na-adịghị emeghe. Akwukwo ndi ahu buru ibu, nke nwere ihe siri ike na uzo. Mkpụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eto ruo 10 cm. Nke dị elu nke akwukwo dị ihe dịka mita 1. Site n'èzí, epupụta dị ntakịrị. N'okpuru otu osisi nwere ike ịchọta site na 12 ruo 23 akwụkwọ. Mkpụrụ ọka bụ kernel nke nwere ike ịdịgasị iche na agba na nha dabere na iche iche.
Ọka dị na mba a bụ ezigbo onye inyeaka ọ bụghị naanị n'ịkwadebe efere dị iche iche, kamakwa n'achụkọta anụ ụlọ, ya mere ọtụtụ ndị bi na okpomọkụ na-etinye aka na nsị ya. Tupu ị akụ ọka na ubi ma ọ bụ na saịtị ahụ, ị ​​ghaghị ịhọrọ ebe maka ihe ọkụkụ ma kwadebe ala.
Enwere echiche na ihe ubi nke oka choro puru ime nani na mpaghara ndida nke mba. Otú ọ dị, a pụrụ ịgha mkpụrụ ọka n'ubi ahụ na mpaghara ndị nwere ihu igwe. Isi ihe - ebe dị mma, ebe ọkụ, na-echebe site na ifufe.
Ọ dị mkpa! Tupu ị kụrụ ọka, i kwesịrị ichegbu onwe gị gbasara ndị agbata obi gị. Ọ ka mma ịhọrọ ebe na-esote ugu, nke ya na akwukwo ya buru ibu na-echebe usoro ọka wit nke na-ekpo oke ọkụ, ma ọ bụ na mkpo - ha na-ebunye nitrogen, nke dị mkpa maka ọka.
Mgbe mgbe mgbe ị na-ahọrọ atụmatụ maka ịkụ ihe, ndị na-elekọta ubi na-eche, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ka mma ịkụ ọka. Mkpụrụ, mkpụrụ, cucumbers, tomato na akwụkwọ nri mgbọrọgwụ ga-abụ ndị kacha dịrị ndụ.
Ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere otú ọka na-eto ma na-amị mkpụrụ, ọ dị mkpa tupu oge eruo ichegbu onwe gị banyere ihe ndị mejupụtara ala nke ihe ubi ahụ ga-eto. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ezigbo iwe ọkụ, ala nke ọma na mmiri dị mma ma dị elu nke humus.
Iji na-akụ ọka, ọtụtụ ihe dị mkpa ka e chebaa, ebe ọ bụghị naanị ebe kwesịrị ekwesị na ala na-arụ ọrụ dị ukwuu, kamakwa oge ndị a na-akụ, usoro ihe ọkụkụ maka ọka, yana usoro na usoro nke ịkụ ọka. Ọzọ, anyị na-elebakwu anya na nuances nile nke ọka na-eto eto.
Ka ọka wee weta ezigbo owuwe ihe ubi, mgbe ị na-eto mkpụrụ, ọ dị mkpa ịmata kpọmkwem oge ịkụ ya. N'okwu a, ị ga-ebu ụzọ kpebie otú ị ga-esi eto eto: site na seedlings ma ọ bụ site na ịgha mkpụrụ ozugbo n'ala na-emeghe.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị bi n'ebe ugwu, ọ ka mma ịhapụ ịgha mkpụrụ nke mkpụrụ osisi na-emeghe ma mepụta ihe ọkụkụ.
Ịgha mkpụrụ na-emeghe oghere na-ekwe omume nanị mgbe frosts na-apụ, okpomọkụ ala dịkwa ma ọ dịkarịa ala +12 Celsius. Nke a bụ njedebe nke April - mmalite May. Ọ bụrụ na ị na-etolite omenala mkpụrụ osisi, a pụrụ ịkụ mkpụrụ ahụ na mpempe akwụkwọ dị iche iche na mbido May, ma a ghaghị kụrụ mkpuru osisi ahụ na-emeghe n'ala n'etiti afọ June.
Ka ọka wee nwee obi ụtọ na mkpụrụ ya dị elu, tupu ị kụrụ ya dị mkpa iji mepụta usoro ndị metụtara nkwadebe ala maka ịkụ ihe. Nke mbụ, a ghaghị ilebara anya iji jide n'aka na ala dị mma nke ọma na nke ọma. Ịkwadebe ala maka kụrụ n'ime otu ụbọchị ma ọ bụ ọbụna otu izu anaghị arụ ọrụ, ya mere ọ bara uru ime nke a na ọdịda. Nke mbụ, ọ dị mkpa igwu mpaghara ahụ 25-30 cm miri. Ị nwere ike ime nke a na onye ọrụ ubi. Na ala, ọ dị mkpa iji tinye ihe ndị metụtara mkpụrụ, ya bụ - rotted nri, phosphate-potassium nri.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ala dị n'ógbè gị dị oke acidic, ị ga-agbakwunye ude mmiri a: 2-3 kg kwa 10 mita.
Na oge opupu ihe ubi, tupu akuku, ọ dị mkpa ịgbaji ala iji kpochapụ ahịhịa ndị ahụ e guzobere, nakwa maka ịnweta ohere oxygen.
Mkpụrụ osisi na-emeghe n'ala nwere ike ịmalite mgbe okpomọkụ n'èzí adịghị ala karịa 12 Celsius. Tupu ịgha ọka sitere na mkpụrụ ka osisi wee pụta ngwa ngwa, ọ ka mma ịkwanye ha. Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi anaghị ama otú ọka si kụrụ ọka, ọ ga-akụkwa mkpụrụ osisi ahụ, na-edebe ha na mmiri ma ọ bụ na-eme ka ha dị ọkụ. Ka ihe niile wee mee nke ọma ma osisi ahụ ebiliwo, ọ dị mkpa iji kpoo ha ọkụ 5 ụbọchị tupu ị kụrụ na okpomọkụ nke + 35 Celsius, wee kpoo na mmiri ọkụ ruo ọtụtụ ụbọchị. Mmiri kwesịrị ịgbanwe mgbe niile. Mgbe nkwadebe tupu akuku amalite, anyị na-aga n'ihu n'usoro ịkụ mkpụrụ: n'ime ala ị chọrọ ime obere grooves ma kụọ mkpụrụ n'ime ha, na-amụba ha 5-7 cm miri emi. Mkpụrụ osisi mbụ nwere ike ịhụ na 2-14 ụbọchị.
Ị ma? Ka usoro ọka na-eme gị obi ụtọ n'enweghị nsogbu, ị nwere ike ịgha mkpụrụ ya site na usoro ndị na-ebufe ya: kụọ ọka na oge dị iche iche nke oge izu ike nke izu abụọ.
Ọ dị mkpa ịgha ọka dịka ụzọ dị n'etiti osisi ahụ dịkarịa ala 40 cm, obosara nke wara wara dị ihe dị ka mita 1.
Ndi oru ugbo achotawo uzo ndi na-acho uzo nke kuru oka, na nke a, a na-agha nkpuru n'ime olulu ato. na nke ọ bụla. A na-ekpuchi ọka wit na ala akọrọ, na n'elu - na ala akọrọ. Mgbe ntoputa nke Ome ọ dị mkpa iji wepụ ihe na-adịghị ike na-epupụta ma hapụ ihe kachasị ike ma mepụtara.
Na mpaghara ebe oyi na-ekpo ọkụ, a na-etokarị ọka na-eto eto ma na-akụ ya n'ala. Ngwurugwu na-enyekwa ndị chọrọ inweta owuwe ihe ubi tupu oge eruo. Na-eto eto ọka na ụzọ na-amalite site na nkwadebe nke ihe kwesịrị ekwesị na ngwakọta ala. Kwaiti kachasị mma maka ịmalite na-eto eto seedlings, akwụkwọ ma ọ bụ iko plastic. Maka seedlings, ọ dị mkpa iji dozie ala, ọ kacha mma ịgwakọta akụkụ abụọ nke compost, otu akụkụ nke peat na akụkụ 1 nke ájá, ị nwekwara ike itinye akụkụ ash. Ke kiet ke otu akpa ọ dị mkpa iji akụ otu mkpụrụ ka omimi nke 2-3 cm ma fesa ájá n'elu. Ọ dị mkpa ka ị na-eto eto na osisi dị ọkụ ma na-emepụta osisi ahụ n'ụzọ dị mma, na-ezere mmiri na-adịghị ọcha.
Ọ dị mkpa! Akuku seedlings kwesiri imezu ya na ihe ndi ozo, kuru osisi n'ime oghere 2-3 cm omimi karia ogo coma, mulch n'elu na aja.
Iji nweta mkpụrụ ọka dị elu, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị ịkụ osisi ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, kamakwa iji lekọta ọka n'oge dum ọ na-eto eto.
Hilling bụ usoro nke na-enwe mmetụta dị mma n'uto ma na-enye aka ịlụ ọgụ. Osisi spud nwere ike ijide aka (n 'ụlọ akuku) ma ọ bụ site na iji ígwè ọrụ. Nyere na ọka ọka ahụ dị oke, osisi ahụ dịkwa oke, ugwu ga-enyere ọka ahụ aka "iguzogide" ikuku nke ifufe, na-emekwa ka ụba baawanye. Tụkwasị na nke ahụ, na-akụ ihe, nke a na-agbakọkọta, mmiri na-echekwa mma karị, usoro nchịkọta n'onwe ya na-agụnye ịtọpụ, nke na-eme ka ohere ịnweta ikuku oxygen. Ọ bụrụ na ị na-atụgharị osisi, ọ ga-azọpụta gị pụọ na iwepụ ata. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụzọ isi chịkwaa ata ah u: nke a bụ usoro ọgwụgwọ nke ihe ọkụkụ, ya bụ weeding, ma ọ bụ ọgwụgwọ nke ihe ọkụkụ na ọgwụ preparations.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị na-eto ọka maka onwe gị, ọ ka mma ịkụ osisi ahụ n'aka ma ghara iji chemicals na ọgụ megide ahịhịa ma ọ bụ pests.
Oge nke mbụ mgbe ị kụrụ ọka ga-atụba mgbe osisi ahụ nweela akwụkwọ 6 mepụtara. Maka nri ị nwere ike iji humus ma ọ bụ compost dabere na mullein ma ọ bụ ọkụkọ ọkụkọ. I nwekwara ike iji nri fatịlaịza, dịka ọmụmaatụ, ammonium nitrate na mmiri mmiri, potash, phosphate, na nitrogen nri ga-mma na-emetụta steeti ọka. Banyere ogbugba mmiri n'ubi, ọ dị ezigbo mkpa iji hụ na ihu mmiri na-adị elu mgbe e guzobere cobs. Ọzọ, mmiri nke osisi kwesịrị ịdị na-agafeghị oke, naanị mgbe ị hụrụ nhicha ala. E kwesịrị imegharị mmiri ka osisi ahụ ghara ịnwụ mmiri mmiri.
Ọ dị mkpa! Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-akwado ọka wit, na-arụ ụka na ọ na-eme ka mkpụrụ ya pụta, n'ihi nke a, bepụsị ụmụ osisi sitere na osisi site n'elu mkpuru osisi ahụ wee gbaa ha ọkụ ka ha bụrụ okooko osisi.
Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ oge owuwe ihe ubi, ọka n'onwe ya ga-agwa ndị nwe ya. Akpa nke mbu bu oke ntozu oke, ihe omuma mbu ya bu agba nke anu, ha aghaghi ibu odo na agba, di nro; ihe na - esote - nsogbu nke ikewapụ akwụkwọ, kpuchie ntị; ihe nke atọ bụ ichikota nke ndụmọdụ nke panicle. E nwekwara echiche nke ntozu oke ndu - akwukwo yellowing, agba agba agba nke ọka, ahịhịa aja. Ọ dị mkpa ka ihe ubi na oge, maka nke a, ị ga-ama kpọmkwem ihe ị na-achịkọta ọka maka: maka oriri ọhụrụ, ọ dị mkpa ịnakọta ọka n'ọkụ mmiri ara ehi na-edozi ọka, ọka maka ọka ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, maka popcorn, na nkwụsị nke ntozu okè. Enweghị usoro nlezianya maka ịgha ihe ọka, ma e nwere ụfọdụ aro ka mma ịgbaso. Nke mbu abughi ndi choro mkpa ka ha wezuga ya ozugbo, mana ka ha na-abata n 'onu ndi ahu nso. Na-anakọta ọka iji kwupu cob si esi. Chekwaa cobs ga-adị n'ime ụlọ akọrọ, na-edegharị ha na elu ka ha wee ghara ịghọ nri maka òké.
Dịka ị pụrụ ịhụ, inweta ezigbo ọka ọka dị nnọọ mfe, na ịmepụta ihe ọkụkụ a adịghị achọ mgbalị dị ukwuu. Isi ihe bụ ọchịchọ, ị ga-enwe ike ime onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya na nri na-atọ ụtọ na mgbakwunye ngwaahịa a, ma ọ bụ mee ndokwa maka anụ ụlọ gị.
Ntak emi ẹsiode nsịre site na ụkwụ ụkwụ
Kedu ka esi eto tomato "Ejupụta ọcha"
Nchịkọta CO2 maka greenhouses na ụzọ ndị ọzọ iji hazie photosynthesis nke osisi gị
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe ndị bụ isi na-akụ ma na-elekọta ọka n'ubi